COVID-19 ao Palestina : miaina antsefantsefan’ny tahotra sy ny fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Mety hanelingelina ny ady atao amin'ny coronavirus ny toedraharaha politika
Nandika (fr) i Justine Solaz
Voadika ny 09 Mey 2021 17:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, عربي, русский, Español, Ελληνικά, Português, English
Vehivavy palestiniàna ao amin'ny Lemak'i Gaza manandratra ny saina palestiniàna. Sary an'i Hosny Salah tao amin'ny Pixabay.
Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.
Ny Lemak'i Gaza, faritany palestiniàna ambany fifehezan'ireo mpitarika avy amin'ny Hamas, be mponina ary mahantra, dia marefo manokana manoloana ny valanaretina COVID-19. Miatrika toejavatra tsy misy hafa amin'izany i Sisjordania, toerana ananan'ireo manampahefana palestiniana fahefàna eo ambanin'ny fanevan'i Mahmoud Abbas.
Ireo otrikarena ara-toekarena tena voafetra be, ary hatramin'ny hamaroan'ny mponina ao aminy, dia vao mainka mahatonga ny toedraharaha any amin'ireo faritra roa ireo hampiasa saina bebe kokoa.
Ny 5 Martsa 2020 i Sisjordania nampilaza ny fisian'ireo tranga COVID-19 voalohany tao aminy. Ny 30 Aprily, niisa 340 ireo trangan'aretina ary 2 no namoy ny ainy.
Ny 22 Martsa, nampahafantatra ny Lemak'i Gaza fa misy tranga roa nentin'olona niverina avy any Pakistana, atahorana hiteraka krizy goavana amin'ny maha-olona. Ny 30 Aprily, tafakatra 12 ny isan'ny tranga, izay nanamafy ny fahatahorana ny fiparitahan'ilay viriosy ao amin'ny faritra, na dia tsy mbola nisy aza hatreto ny fanambaràna hoe nisy namoy ny ainy.
Nandray fepetra haingana be sy nivantana ireo manampahefana tao an-toerana mba hampihenàna ny fiparitahan'ilay viriosy. Taorian'ny fitomboan'ny tranga hita tao Israely, firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, voarara ny fifamorivorian'olona. Nantsoin'ny minisitry ny fahasalamàna ny mponina ao Gaza mba hanao maska, na dia tsy nisy aza fepetra henjana napetrany.
Nisy fandraràna ampahany ihany koa napetraka ho an'ny fivezivezena ary, hatramin'ny faran'ny Martsa, tsy maintsy mihiboka 21 andro izay olona rehetra miverina mody ao Gaza. Mba hampiharana io fepetra io, nisy io ivontoerana vonjimaika najoro ho fanibohana, natao handraisana ireo nody an-tanindrazana :
Ivontoerana iray fanibohana, an-dalam-panorenana ao Gaza.
Nakaton'ny manampahefana palestiniàna daholo ireo maoske ary napetrany ireo fepetra momba ny elanelana 1 metatra. Ny 23 Aprily, nisy Palestiniàna iray nohelohina higadra 6 volana satria tsy nanaja ireny fepetra ireny.
Araka ny nolazain'ireo manampahefana palestiniàna, ireo mpiasa niverina avy any Israely no tena loharano nipoiran'ny aretina tao Sisjordania, efa ho ny ampahatelon'ireo tranga rehetra voalaza. Palestiniàna mpiasa manodidina ny 150.000 eo ho eo no nody any amin'ny faritra palestiniàna ary niditra tamin'ny fihibohana.
Nifanindry tamin'ny fiandohan'ny volana Ramadàny, ny 24 Aprily, 8.000 ireo mpiasa niverina avy any Israely nandalo tamin'ireo toeram-pisavàna eny amin'ny sisintany, izay niteraka ahiahy maro momba ny mety ho fisian'ny tranga tsy voatily. Naka fepetra teritery kokoa ireo manampahefana ao an-toerana mba hamerana ny fivezivezena no sady nametraka ihany ny fihibohana roa herinandro ho an'ireo izay mandalo amin'ny sisintany iraisany amin'i Israely.
Niteraka fahaverezana asa ho ana mpiasa marobe, hatramina fikatonana orinasa maro, ireo fepetra napetraky ny manampahefana tao an-toerana. Nisy fiantraikany nivantana tamin'ny taham-pahantràna tany amin'ireo faritany ireo izany. Araka ny nambaran'ireo manampahefana ao an-toerana, Palestiniàna 53.000 no latsaka any ambanin'ny fetra faran'ny fahantràna nanomboka tamin'ny nanambaràn'i Mohammed Abbas, praiminisitra palestiniàna, ny fanjakana latsaka an-katerena, tamin'ny 29 Martsa.
Mbola zavatra iray mampiasa saina ihany koa ny amin'ireo faritra be mponina sy mahantra. Ao amin'ny Lemak'i Gaza, miparitaka amina 300 kilaometatra mahery ireo vahoaka 2 tapitrisa. Ao amin'ny tanànan'i Jabaliyah, ohatra, olona 115.000 no no mivangongo mipetraka anatina velarantany 1 kilaometatra toradroa. Manodidina ny 80 % amin'ny vahoaka no miankin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany ary ny tahan'ny tsy fananana asa dia vinavinaina ho 40%.
Nomarihan'ny mponina iray ao Gaza ny hasarotry ny toedraharaha: « Raha ny mahazatra, mahazo famantsiambola izahay, fanomezana ary sakafo, saingy amin'ity taona ity, ho hafa ny zavatra rehetra noho ny fisian'ny COVID. »
Mampanahy ihany koa an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny tsy fahampian'ny fitaovana entina miatrika ny valanaretina mety hitranga. Mpiasa iray matianina amin'ny fahasalamana no nanipika izany:
Tsy ampy ny hôpitaly, ny fandriana any amin'ireo sampana fandraisana maika ny marary (ICU), tsy misy fitaovana fanodinan-drivotra. Takatro tsara izany.
Manaitra manokana ny tsy fahampian'ny fitaovana fitsaboana ao Gaza, 100 monja no fitaovana fanodinana rivotra misy ao, kely dia kely ny isan'ny hôpitaly ary tsy ampy fandriana ireo ICU. Lazain'ireo manampahefana ao an-toerana fa, manana fandriana 120 eo ho eo i Gaza any amin'ireo ICU, saingy ny ankamaroany dia efa misy marary hafa ankoatra ireo tratry ny COVID-19.
Nandritra ny antsafa iray ho an'ny gazety, nandefa antso ho an'ireo tontolo izao ireo manampahefana ao an-toerana mba hanolotra fitaovana fiarovana sy kojakojam-pitsaboana hafa. Tapak'andro ihany amin'ny ankapobeny no mba misy herinaratra, izay mametra ny fiasan'ireo hôpitaly ao amin'ny faritra.
Manentsina ny banga napoitran'ny COVID-19
Mba hiatrehana ireny filàna ireny dia nandray fepetra marobe ny Birao ao amin'ny Firenena Mikambana, misahana ny fanampiana sy ny asa ho an'ireo mpialokaloka avy ao Palestina any amin'ny faritra Proche-Orient (UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Ny 1 Aprily, nanomboka nanatitra sakafo ilay fikambanana ho an'ny tokantrano misy ankohonana 240.000.
Ny 14 Aprily, nisy drafitra famonjena natombok'ireo manampahefana palestiniàna ho an'ireo ankohonana tena mahantra. Ny Fiombonambe Eorôpeàna no namatsy tamin'ny ampahany io drafitra io. 134 sekely (38,30 dolara amerikàna) isam-batanolona no nozaraina. Adnan Abu Hasna, mpitondra tenin'ny UNRWA ao Gaza, nanambara fa nandefa antso iray ho fanangonam-bola maika mitentina 14 tapitrisa dolara amerikàna hiadiana amin'ny coronavirus any amin'ireo toby fialokalofàna palestiniàna miisa 58. Saingy hatreto, 30% monja amin'io vola io no azo.
Tamin'ny volana lasa, orinasa palestiniàna iray miorina ao Gaza no nanomboka namokatra maska sy fitaovana fitsaboana. Ny 7 Aprily, nahavita maska 150.000 sy aron'akanjo miisa 5.000 ilay orinasa. Vetivety kely dia nitatra hatrany Sisjordania ny fitsinjarana natao tao an-toerana, ary ankehitriny ny maska dia amidin'ilay orinasa mivantana amin'ny fanjakana ao Israely, izay lasa mpanjifa fototra ho azy.
Tao Gaza ihany koa, tamin'ny fampiasàna “imprimante 3D”, namokatra masaka an-jatony ilay tsimok'orinasa Tashkeel 3D. Taorian'ireo antso nalefan'ny tompony, nomena alàlana hivoha ireo trano fisakafoanana ny 29 Aprily, amin'ny fanajàna hatrany ireo fepetra momba ny elanelana sôsialy.
Ao anatin'ilay krizy, tsikaritra ny fisian'ny fiaraha-mientana be teo amin'ireo manampahefana israeliàna sy palestiniàna. Tsy ela akory izay i Nikolay Mladenov, mpandrindra manokana nalefan'ny Firenena Mikambana ho an'ny resaka fandriampahalemana ao Afovoany-Atsinanana, dia nanipika fa ny toedraharaha nateraky ny COVID-19 dia “ohatra iray manainga fanahy amin'ny resaka fiarahamiasa miala lavitra ny tsipiky ny fifandirana. »
Amin'ny maha-hery mpibodo tanin'olona azy, ireo fikambanana iraisampirenena tsy miankina amin'ny fanjakana no nanosika an'i Israely mba hanalefaka ny fahiranony amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fahadiovana ary hamela ny fivezivezena mamalaka ho an'ny entana tena tsy maintsy ilaina.
Miaraka amin'ireo tranga efa ho 15.147 sy fahafatesana miisa 198 voatatitra, tena asian'ilay viriosy mafy tokoa i Israely ary miomana mafy amin'ny mety hisian'ny onja vaovao tonga mivantana avy any Sisjordania sy ny Lemak'i Gaza.
Ny 15 Aprily, Moshe Kahlon, minisitry ny fitantanam-bola ao Israely dia nampanantena fampindramana vola ho an'ireo faritany palestiniàna mba « hanampiana azy ireo hiatrika io krizy io ». Resahan'ireo manampahefana miaraka amin'ny Firenena Mikambana ny momba izay fepetra hiantohana ny vola atolotry ny manampahefana israeliàna mba tsy ho latsaky ny 137 tapitrisa dolara amerikàna mandritra ireo volana efatra ho avy.
Ny 12 Aprily, ho an'ireo mponina ao Gaza dia nisy dingana fitiliana napetraky ny tafika israeliàna ao amin'ny laboratoaran'nytafika ao Tzirfin. Kanefa, noho ny tsy fisian'ny fandrindràna, nolavin'ny governemanta israeliàna ilay fandraisana andraikitra.
Tsy afaka nanarona ireo fihenjanana misy ao amin'ny governemanta roa tonta ireo ohatry ny fiarahamiasa ireo.
Ny 21 Aprily, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny finiavany hanomboka ny fakàna an'i Sisjordania ny governemanta vaovao vao nijoro ao Israely. Ho setriny, nandrahona ny hanafoana ireo fifanarahana nifanaovan'ny firenena roa tonta ry zareo manampahefana palestiniàna.
Nanambara ihany koa ireo manampahefana avy amin'ny Hamas manara-maso ny Lemak'i Gaza fa raha toa i Gaza tsy mahazo ireo fitaovana fitsaboana ilainy, ho « tampenany ny lalan-drivotr'ireo » Israeliàna 6 tapitrisa, amin'ny fandrahonana hanao fanafihana an'i Israely.
Mety hisy fiantraikany amin'ny krizy ateraky ny COVID-19 ny fiharatsian'ny toedraharaha politika ary hidona mivantana amin'ireo olontsotra ao an-toerana any amin'ireo faritany roa ireo. Ankehitriny dia miaina mitsingilahila eo antsefantsefan'ny tahotra sy ny fanantenana ireo mponina ao Israely sy Palestina.